Blaise Matuidi Ụmụaka Akụkọ nke Na-adịghị Ebube Ihe Ndị Na-eme Eme
Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Blaise Matuidi Ụmụaka Akụkọ nke Na-adịghị Ebube Ihe Ndị Na-eme Eme
LB presents the Full Story of a Football Genius best known by the nickname; “Marathon Man”.
Our version of Blaise Matuidi’s Childhood Story, including his Untold Biography Facts, brings to you a full account of notable events from his boyhood days right until he got fame.
Nyocha nke Veteran French Footballer gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ ihe na-emeghị ka ọ mara banyere ya.
Ụmụaka Kevin Gameiro Akụkọ nke Ihe Na-adịghị Agbanwe Ihe Ndị Bụ Eziokwu
Yes, everyone knows about his energy, work rate and tactical intelligence. However, only a hand few fans know much about Blaise Matuidi’s Bio which is quite interesting. Now, without further ado, let’s Begin.
Akụkọ Blaise Matuidi nke Blaise - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ French Footballer na 9th nke Eprel 1987 na Toulouse, France. A mụrụ ya nna Angolan, Faria Rivelino na nne Congo, Élise.
Nna Blaise Matuidi Rivelino mgbe ọ dị obere kwagara France si Congo dara ogbenye iji chọọ ndụ ka mma na ọdịnihu maka ụmụ ya.
Matuidi toro na umuntakiri ndi ozo; Emmanuel, Jacqueline, Sylvie, na Junior. Kidsmụaka niile tolitere na mpaghara Paris nke Fontenay-sous-Bois, ebe ebe izu efu na-agwụ mgbe enwere bọọlụ n'ụkwụ mmadụ.
Dịka nwatakịrị, Blaise gara ụlọ akwụkwọ Victor Duruy (nke dị na Fontenay-sous-Bois). N'ụzọ dị mwute, ụlọ akwụkwọ a nyere Matuidi ohere igwu bọl asọmpi.
O juru onye ọ bụla anya na nwatakịrị Matuidi ga-eme ihe ụmụaka ndị ọzọ enweghị ike ime n'ọhịa. Ọsọ ọsọ ya na-eto eto na-eto eto n'oge ọ na-aga akwụkwọ ụbọchị, bịara, niile na-ekele PSG Akụkọ Ochie Austin Jay-Jay Okocha.
Ọ bụ nkà nke Jay-Jay Okocha nke mere ka Blaise chee banyere ọkachamara ịga.
Didier Deschamps Akụkọ nwata gbakwunyere Eziokwu Akụkọ Na-adịghị Anya
Blaise Matuidi Biography - Ọrụ na Nchịkọta:
Mgbe ọ dị afọ isii, nne na nna Matuidi chere na ọ dị mma nwa ha ịmalite ọrụ ịgba bọlbụ mgbe onye nkuzi ụlọ akwụkwọ nyere ndụmọdụ nke buru ụzọ chọpụta talent ya.
A nabatara Matuidi na ụlọ ọgbakọ obodo ya bụ US Fontenay-sous-Bois ebe ọ nọrọ afọ 5. N'okpuru bụ foto nke obere Blaise Matuidi na ndị otu ya.
Mgbe afọ ise gasịrị na klọb ahụ na ịchọrọ inweta ahụmịhe ọzọ, Maltuidi sonyeere CO Vincennois ebe ya na Yacine Brahimi nọ otu afọ.
Fernando Llorente Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Ọ bụ n'afọ 1999 afọ 12 ka Matuidi gosipụtara dị ka otu n'ime ndị egwuregwu kachasị mma na mpaghara -le-de-France (mpaghara dị na etiti etiti France).
Ọzọkwa, iji nweta ahụmahụ ndị ntorobịa karị, Matuidi na-amalite ịbawanye ọrụ ya. Ọ nakweere onyinye sitere na agụmakwụkwọ mara mma Clairefontaine ọbụlagodi na Vincennes.
Matuidi ga-azụ ọzụzụ na agụmakwụkwọ maka oge atọ, na-egwuri egwu n'ebe ahụ na ụbọchị izu ma na-egwuri egwu n'otu oge na Vincennes na ngwụsị izu.
Julian Draxler Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Akwukwo Ihe Ozo
Na 2001, ọ hapụrụ ọgbakọ abụọ ahụ ka ọ banye maka Créteil tupu ya emechaa ọrụ ntorobịa ya na Troyes n'etiti 2004 na 2005.
After playing his senior career at two clubs (Troyes and Saint-Etienne), Maltuidi became the most sought-after player, and he got the best transfer opportunity.
On 25 July 2011, Paris Saint-Germain, who had just become rich, confirmed Matuidi’s signature as a replacement for the departed Claude Makélélé, bụ onye lara ezumike nká na egwuregwu. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ònye bụ Isabelle? Nwunye Blaise Matuidi:
Obi abụọ adịghị ya, ike Matuidi na egwu ya na ndụ ya si na pitch na-ewuli elu zuru ezu banyere ya. Ọ dị mkpa ịsị na n'azụ ndị ọ bụla French na-agba ọsọ, e nwere otu ọhụụ glamourous, enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye.
Matuidi malitere mmekọrịta ya na egwuregwu ya na obi obi nwata bụ Isabelle onye bụ nwa amaala Troyes.
Mkpakọrịta ha weere ha site n'ọnọdụ kacha mma na ezi ịhụnanya. Matuidi echetala otu n'ime ncheta nwata ya nke na-ekwupụta ịhụnanya ya maka Isabelle ma kwere na ha nwere ike ịlụ di na nwunye n'otu ụbọchị.
Obi abụọ adịghị ya na Isabelle, ọmarịcha ọmarịcha French kacha mma anyị derela banyere ya. Dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru, ọ bụ n'ezie paragon nke ịma mma na ịdị mma.
Maka otu nwatakịrị bụ Matuidi n'oge mbụ, ọ dị mkpa ka ọ dị ebumnuche mgbe ọ gbasara ịhụnanya nwoke na nwanyị.
Ka ọ na-ezute ya ma nwee ịhụnanya n'oge ọ dị afọ iri na ụma, Matuidi ji ịhụnanya dị ukwuu gosi Isabelle, mgbe ụfọdụ ọbụlagodi na ya karịa na-enweghị nyocha ozi na mmetụta ọ na-enweta na nloghachi.
N'ụzọ dị mma maka ya, ọ zutere nwa agbọghọ mara mma ma mara mma nke mere ka mmetụta ya nwee mmetụta, mmetụta nke na-aga n'ihu ruo n'oge ekworo nke ndị na-ahụ ihe.
N'oge na-adịghị anya mgbe ndị hụrụ ya n'anya zutere mgbe ha dị afọ iri na ụma, ha malitere ịlụ ma bụrụ ndị na-enweghị ike ịhapụ.
Enai Emery Child's Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu
Ma Isabelle na Blaise na-edebe ihe ha nke ọma, pụọ na usoro mgbasa ozi na-eme ka ha bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma dị omimi.
N'agbanyeghị aha nwoke ya, Isabelle yiri ka ọ dị mma na ịbụ onye ọhaneze amaghị.
O mechaghi ihe ọ bụla iji kpughee onwe ya na ndị nta akụkọ - ọbụlagodi akaụntụ mgbasa ozi ọha na eze na-etinye ya na nzuzo - belụsọ mgbe ọ bịara igosi nkwado ya maka nwoke ya na oche; ọrụ nke na-abịa na aha nke kachasị mara mma na akụkọ ihe mere eme nke football.
Ihe gbasara alụmdi na nwunye: Blaise gwara Isabelle na 2016. Ihe omume ahụ mere mgbe ha gara na fim ahụ na-ekpuchi ha egwu ihu iji hụ Star Wars.
Dị ka Isabelle si kwuo ya;
“In February 2016, he took me to the Grand Rex to see the movie Star Wars.
We arrived in the room, but instead to see the usual movie’s trailers I saw a small film, a montage of our family photos, which ended with a request for marriage.”
"Enweghị m ike ikwere ya, amalitere m ákwá, o mekwara otú ahụ."
Di na nwunye ahụ mara mma ejikọta na July 1, 2017, na Paris. Ụmụ ha bịara mgbe ha nọ na-eme ihe agbamakwụkwọ ahụ dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru ebe a.
Isemụaka Blaise Matuidi:
Ndị enyi abụọ ahụ bụ ndị nne na nna dị elu nke ụmụ ha atọ: ụmụ nwanyị Myliane, Naëlle na nwa Eden Foto dị n'okpuru. A mụrụ ụmụ ha tupu alụmdi na nwunye ha.
There is no doubt Isabelle Matuidi keeps the balance for her man. Blaise describes Isabelle as a strong woman who can keep her feet on the ground.
Dabere na mgbasa ozi French, Isabelle zuru oke na ọ na-ejikwa ego ezinụlọ, nyere aka izere mmefu ọ na-enweghị isi ma gbalịa ime ka onye ọ bụla na-arụsi ọrụ ike na kichin dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru.
Dị ka ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ French na-etinye ya, nne nke atọ bụ otu nwa akwụkwọ osteopathy (Onye na-agwọ ọrịa ahụike site na nhịacha na ịhịa aka n'ahụ nke ọkpọ na ịkpụkpụ).
Ọ bụ onye nwe ya Gimmini, ebe egwuregwu maka ụmụaka.
Blaise Matuidi Ndụ Nke Onwe:
Ọnụnọ nke Blaise Matuidi na-egosi mmalite nke ihe siri ike na ọgba aghara.
Ọ hụrụ dynamism, ọsọ na asọmpi n'anya. Matuidi na-enwekarị mmasị ịbụ onye mbụ na ihe niile - site na ọrụ gaa nnọkọ mmekọrịta.
Ọ bụ mgbe Maltuidi na-eme ihe, mgbe ụfọdụ tupu ya echee banyere ya nke ọma.
Blaise Matuidi nwere ezigbo nhazi na ikike ịmecha ọtụtụ ihe n'otu oge, ọkachasị tupu ezumike nri ehihie ya.
Matuidi’s biggest issue comes when he gets impatient, aggressive and venting anger, which he could point to other people.
N'ihe banyere ike ya, Matuidi nwere obi ike, kpebisie ike, nwee obi ike, nwee ịnụ ọkụ n'obi, nwee nchekwube, n'eziokwu na n'ụzọ doro anya, ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ.
Banyere adịghị ike ya, Matuidi nwere ike inwe ndidi, obi ọkụ, onye dị mkpụmkpụ, onye na-eme ihe ike na onye na-eme ihe ike.
Banyere ihe dị ka, Matuidi hụrụ uwe dị mma, na-arụ ọrụ nduzi, ihe isi ike dị iche iche na ịgba egwu.
Matuidi enweghi ntụsara ahụ na arụghị ọrụ na igbu oge n'ụdị ọ bụla na ọrụ nke na-ejighị talent mmadụ.
Matuidi bụ onye nwere obi ike, ọ naghị atụ egwu ọnwụnwa na ihe ize ndụ. Ọ dị njikere ịbụ dike nke ụbọchị ahụ, gbapụ ma buru ọtụtụ ndị nwere nsogbu, ndị na-adịghị ike n'azụ ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Blaise Matuidi Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Stade Rennais bọọlụ bọọlụ
Jeremy Doku Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Eduardo Camavinga Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ